kala guurka ah, si ay tamartaa khiyaano (qaybta labaad) | Cosmos koobi karayn
Posted in waxaan
Tan iyo carruurnimada, lagu gartaa xaqiiqada ah, in ku dhow Waxaan abuuri kari lahaa matalaad xisaabeed dhacdada, kuwaas oo run ahaantii kaliya sharraxaad afka ah.
si loo ilaalin noolaanshaha
bannaan tallaabooyinka, Waxaan u isticmaali doonaa habka dhaqdhaqaaqa isfeerada.
sawir 1. dhaqdhaqaaqa dhinacyo ka
Red - Baaxadda tamarta compaction.
jaalaha ah - Baaxadda tamartaa naxariisbadanaha.
buluug - Baaxadda kartida Tactical ee u shaqeeyo. (Waxa ay muujinaysaa in saddex jagooyinka).
yar buluug madow goobada - xarunta of hadafka our (hawadooda iyo xooggooda).
line cirro - iman kara ee qaata noocyada kala duwan ee tamarta.
Hawadooda fudud: rabay, Waxaan gelin xoog, iyo, ku xiran tahay waqtiga, kuraasta, qodobada, xaddiga awood iyo tayo leh, waxaa labada oofiyey ama ma. (haddii arrimahaasi waxay tahay meesha uu ku noqon karo).
Wajahadda kartida xeeladeed ee jirka - ka, in jidhka hadda waa in ay u adkeysan ama in la sameeyo awood.
sidaas darteed, our shaqadoodu tahay in ay ka soo rogo Wajahadda fursadaha taatiko u shaqeeyo
ka Meelaha tamarta cufan in Wajahadda of tamartaa naxariisbadanaha. Iyo waqti isku mid ah waxaan u baahan nahay in ay di'i Sphere ee Love Ilaahnimadu, kuwaas oo hadda waa la arki karo dhib iyo dhammaantiin ma aha, ama xataa laga shaabadeeyey ay. ie. kulli wixii aannu u baahan tahay in ay sameeyaan si bannaan "High".
Waxaan ma ku abuurta doonaa wax - u isticmaal, in ay jiraan: awoodaha jir jidhkeenna. Oo in aan u baahanahay in ay bartaan in ay ka maqashaan dhawaaqa uu qalbigiisa ka.
Waxbarashada: Waxaan ka baxsan tag, waxaa maamula 100 mitir xawaare, Waxaan maqli wadnaha Visit, xusuuso. Yaa dareen aad u hooseeyo - maalintii ama saddex sidoo kale la socon kartaa waqtiga, ilaa aad mid kici wacyi kalsooni, waa garaaca wadnaha aad. Haddii ay taasi ma shaqayn - Waxaan ku talinaynaa in ay diiradda saaraan daaweynta ee beeraha ama in beeraha labo xiga ee sano.
Hadda, hubaysan qiimo aqoon cusub, Is qotomiyey on il joogto ah "sare", TK. tamar runtan waxaan ognahay si uu u nuugo, siyaabaha, ku tilmaamay hore. Haddii aadan samayn hore - in sida dareenka waxaad weli u Marna ahaa. Ma aha oo kaliya la dareenka carruurnimada u dhigma, laakiin sidoo kale ka xoog iyaga ka badan. Xataa in aan la yaab leh.
Hel u barta: waxba doono, weli waxba dhicin (mabda 'sababaha).
Guud ahaan, waxaan iyada u baahan in ay u guuraan: baaxadda fursadaha taatikada. hoose: haddii jirka aan saxiixay in - uu leeyahay, in ku saabsan qaar ka mid ah aan soo gaadhay.
gool waa noo caddeeyo - waxaannu halkaas ku tuur noolaha cuntada, oo uu bilaabo inuu cuno khafiif ah tamartaa, halka u hoggaansanaayeen dareen aan caadi ahayn raaxaysi, sahal, diyaarad, hareerayn dareen Worldwide, dareen dhamaystiran Worldwide. Hadda waxaad u baahan tahay inaad ka guurto, haddii aad doonaysid in aad samaysid. On heerka rabitaan waxaa lagu qeexay sida, wareejin in xarunta gaar ah hawadooda Midig gudbikaraa taatikada. Intaa waxaa dheer,, taas oo u dhaw in ay xarunta Meelaha of tamartaa naxariisbadanaha. Oo aan ku eekaan booska ilaa halka yimaado garaaca qalbiyadeenna innaba. ie. cabbin shaah kaliya oo ka boodi Energy runtan.
Marka qalbiga ku waa garaac - halkaas tago . Waxa ay noqon doontaa wakhti aan ka horeyn 3-7 maalmood. U hubso in aad dareentid in cuntada, oo waxay yeelan doonaan, dareemaan dhadhan, robab gaari, iyo tuurin oo afka oo dhan oo isku xigta. Bilowgii waxa aad cuni kartaa oo dhan aad rabto in aad, iyo xataa hilib. Laakiin markaas tufaax lahaan saddex maalmood oo ay ku jam hor inta aadan bilaabin wajiga labaad, waa in detoxify madaxa aan "dillaac" (inkastoo aad tahay xaq in ay isku dayaan - madaxaaga). Inta lagu jiro hadhuudhka ah, waxaad dareemi doontaa sida wadnaha bilaabmin si caadi ah u ordaan. Waxaan dhamaanteen u baahan tahay inaad, in had iyo jeer ayaa ku shaqeeya hab caadiga ah.
Marka aad ka guurto iyo xarunta doonayo in ay gaaraan soohdintu waxay ka tageen ee u shaqeeyo gudbikaraa taatikada, oo wakhtigaas hore u noqon doonaa "laba" meel (Taas macnaheedu waa in aad awood u si uu u nuugo heerka hore ee cunto noolaha ma noqon doonto) qalbigaaga sidoo kale waa at zastuchit ah xawaaraha sare. Tani waa calaamad, waxa la joogaa wakhtigii si ay u bilaabaan marxaladda soo socota.
Guud ahaan, ku dhaqanka waa mid fudud: is ogow naftaada ka mid taxane u garaaca wadnaha kale. Jirkaaga sameyn doonaa wax kasta: waxaa fiican in la ogaado waa.
Fursada aan fiicnayn – Haddii xarunta jecel yihiin oo ku yaalla bartamaha gudbikaraa oo taatiko. Laakiin taas aad u baahan tahay dareen sare.
Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u guurto ka tamartaa khiyaano, xataa kuwa kaydka kaliya chakra afraad. Oo weliba: haddii aad leedahay wadnaha, oo garaacana - Space aad u qaadato in ay tamartaa khiyaano. Laakiin waxa fiican in aad naftaada u samayn.
Xaqiiqada ah in aad la qaadi doonaa si tamartaa khiyaano sida xaqiiqada ah sida, in kasta oo idinka mid Doono Ilaah. Waxba ma ahan wixii aad aaminsan tahay: inkastoo Land ee, xataa in Shaydaanku, laakiin ugu yaraan in afadiisa, ama xataa deris. In kastoo aad Nuur, inkastoo aad oo ah hooska, in kastoo aad ka dhawaajiyaan, in kastoo aad u weyn Slough, inkastoo aad tahay dhillo, xitaa boqor qudhiisu edinovlastny - isaga u waxba kuma kala duwana.
Marka gudbikaraa oo taatiko gaadho meel saddex waxaad u baahan doontaa si ay u muujiyaan doonista oo dhan, qaadashada iyo raasamaal ee xirfadaha, inay cunaan isku waslad oo nacnac, oo aan 300 garaam.
habka shaqada 100 boqolkiiba. Habboon ee muddo ku dhow oo dhan +/- 10%. The "baldezhny" inta badan dadka, imtixaanka in. Waxay qaadataa qiyaastii saddex bilood. Hubisay, shahaado, saxiixay, oggolaaday, labalaabka, dibadda u diray, ku dhisnayn, badbaadiyey, xisaabta lagu darsado, xaqiijiyay. Oo, idinkoo xukumaya by natiijooyinka, ka dib iyo cabitaan daruuri ma aha doono.
wax soo saarka gaaban. Haddii ay marka hore waa in aan xoogga saarnaa cunto khudaar, marka aad gaarto 100-300 waxyaabaha g - u baahan doontaa inaad gasho in cuntada aad ugu jeceshahay. Waxaa laga yaabaa in nooc ka mid ah isku dardaro ama shokolaatada caano aruurshey, maraq "Maggi". Iyo dhamaadkii oo dhan cunto waa in ay awoodaan in ay qaataan qaab dareere ah (nooca caanaha la kariyey malab, ama shaah sonkor). jirka ee xoog aan ku talinaynaa yogurt. Waxaan si xoog leh oo aan ku talinaynaa in ay cunaan hilibka, haddii aad, Dabcan, weli mustaqbalka in ay isticmaalaan awoodooda fikir iyaga u gaar ah.
Dhammaan alaabta la dhadhan af - waxay doonayaan waa in la kordhiyo yaamayska, taas oo niyad jebisaa caanaha wanaagsan. Filan iyo lammaanaha kabashooyin. cuntooyinka Plant si fiican u samayn karo si loo xakameeyo doonayo inuu dadka u cuno, laakiin waxaa jiray wax qalad ah, iyada oo leh: kiimikada laga yaabaa in dad badan oo loo isticmaalo in howsha. laakiin 2/3 jidka taam.
Guud ahaan, cuntada - wax, Waxa uu horey u noqday shaqal aan caado, wax u eg daroogada. Oo aad tahay nasiib, haddii aad ku yaal ma aha 20 sano. Habkani waa ku haboon daaweynta ku tiirsanaanta daroogo kasta.
Heshiisyo U tamartaa khiyaano Waxaa lagu talinayaa haddii aad leedahay depresnyak joogto ah, madax, arxandarro, colnimadiinna in ay ku noolaadaan, heerka tamarta oo yaraada, flash gardarada, haddii aad qaraabada iyo saaxiibada inta badan ku talinaynaa: "Popey valeryanochki" ama khamri, Haddii aad heshay ah qorshaha "xariif" kulan la "dhimashada" raacay by sii nolosha, ilaalinta xasuusta shirka this, haddii aadan ka heli buro kasta, iyo cudurada, taas oo dhakhaatiirtu gariir plechmi. Dabiiciga Living qabidda nuugo oo dhan.
... maanta ahayd beeraha, berri la yaab leh: sidaas daboolida labaad Wave...
Waa in aad hadda bilaabi!.
awooddo. До того как начнется только вода лучше употреблять натуральные продукты, ну и, Dabcan, никаких животных белков или мяса. Хотя молоко пить можно.
благодарю, bannaan)) у меня такое впечатление что многое из того что здесь на сайте написано я уже знала. только нужно было вспомнить.
Знали, но боялись вспомнить? sida caadiga ah, все гениальное кажется знакомым.